Wynd Plus yekunatsa mweya inoenderana neIOS | IPhone nhau
Anonatsa mweya, hongu. Mukutaura, iyo Cupertino kambani haina iyo yekutengesa pamapeji ese ewebhu uye kwete muzvitoro zvese zvepanyama izvo zvakapararira mudunhu rese, zviripo mu American Apple webhusaiti chete, asi zvinokwanisika kuti munguva inotevera maawa mashoma ichatanga zviri pamutemo kushambadzira iyi Wynd Plus mune zvimwe zvese zvitoro.
Iyi idiki yekunatsa mweya inoenderana neIOS yekutenda kune yayo app uye izvo sekutsanangurwa inopa vashandisi mukana wekufema mweya wakachena mukati nekunze. Aya marudzi ezvigadzirwa haana kujairika muchitoro cheApple asi ichokwadi kuti iyo catalog catalog inoramba ichikura pamatanho ese uye mumativi ese ehupenyu hwedu hwezuva nezuva, kunyangwe nemabrashi emazino emagetsi.
Iyi yekunatsa idiki uye inobvumira vashandisi kuitora chero kupi pasina dambudziko, sezvo iri kukura kwehombodo diki yemvura. Inowedzerawo firita ine chitupa chekurapa icho chinokwanisa kuteya mukume, guruva, utsi, mabhakitiriya asina kugadzikana emarudzi ese uye kunyangwe nevhudzi diki rezvipfuyo zvedu zvemumba zvinogona kukonzera matambudziko ekufema kune vamwe vanhu. Chinokanganisa ndechekuti haina kuwedzera kuenderana neKeKKit uye ichi hapana mubvunzo chimwe chinhu chinoshamisa mazuva ano zvakanyanya nerudzi urwu rwechigadzirwa.
Wynd Plus inopa mushandisi mukana wekuve nemhando yemhepo yavanofema inodzorwa nguva dzese nekuda kweapp inowanika paIOS uye iyo sensor iyo yaunogona kuisa chero kupi zvako kupfuura kwayakange iri nzvimbo, iri pazasi payo pachayo. munatsi. Nenzira iyi unogona kuve nemhepo inodzorwa kubva chero kupi kuburikidza nekushandisa kunoenderana neIOS. Mutengo wechigadzirwa i $ 199,95.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » IPhone zvishongedzo » Wynd Plus anowirirana neIOS ekuchenesa mweya